एकतामा विलम्ब घातक : सरकार सस्तो प्रचारमा रम्नु बुर्जुवा संस्कार !
नेकपाको युवा संगठनमा आवद्ध आचार्य समसामयिक विषयमा लेख्छन् ।
अहिले २ ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकता भएर विशाल पार्टी बनेको करीब १ वर्ष हुँदैछ । सांगठनिक रूपमा पार्टी तल्लो तहसम्म पूर्ण एकता भइसकेको छैन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता आधार एमाले वा माओवादी दुवै विचार, संगठन र राजनीतिक मान्यतामा विलय होइन, विचारको विकासमा नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको बुझ्नुपर्छ ।
एकताको अर्थ समानता हो । एकता भनेको पार्टी प्रवेश होइन । राजनीतिमा एकता, संघर्ष र रूपान्तरण स्वाभाविक हुन्छ । विगतमा एकआपसमा धेरै संघर्ष गरेका नेकपा नेताहरू एकतासँगै नयाँ पार्टी निर्माणसहित रूपान्तरणको केन्द्रमा आइपुगेका छन् ।
विगतका संघर्षका क्षेत्र फरक–फरकको परिणाम हुनसक्छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धिबाट आएको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी र समानुपातिक स्वीकार गरेका नेकपाका नेताले एकतापछि पनि मञ्चपिच्छे भिन्दाभिन्दै शैलीका विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा जनयुद्धको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । यसर्थ जनयुद्धलाई द्वन्द्वको रूपमा मात्र बुझ्नु अधुरो बुझाइ हो ।
गरीब, श्रमजीवी र किसान वर्गलाई समृद्ध बनाउन गर्नुपर्ने कार्यबारे नेकपा नेता कार्यकर्ताले सघन बहस गर्न आवश्यक छ । नेकपालाई गफ गर्ने चौतारी बनाउनुभन्दा गरिखाने पार्टी बनाउन कार्यकर्तामा आलोचनात्मक चेतनाको आवश्यकता छ । नेकपा नेताहरू सिंहदरबार वरिपरि घुम्नुभन्दा जनताका घरआँगनमा पुग्नु आवश्यक छ ।
यतिबेला दुईतिहाइ मत सहितको सरकारको नेतृत्व नेकपा अध्यक्ष ओलीले गर्नुभएको छ । झ्वाट्ट हेर्दा बाहिरी जगत नेकपामयजस्तो देखिन्छ । नेतादेखि कार्यकर्ता उत्साहित छन् । यसर्थ अहिले नेकपालाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ । तसर्थ वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी धेरै छ । सस्तो प्रचारमा रम्नु बुर्जुवा संस्कार हो । वर्तमान सरकार ५ वर्षे स्थायी हो । यसर्थ सरकारका मन्त्रीज्यूले काम गरे स्वतः प्रचार हुन्छ । आजको आवश्यकता पारदर्शिता र इमान्दारिता हो ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा जनवर्गीय संगठनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले गरेका कामको सकारात्मक प्रवाहबारे जनवर्गीय संगठनलाई तदारूकता साथ अवगत गराउनुपर्छ साथै खबरदारी पनि गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय पार्टीका वैकल्पिक नेताहरूको उत्पादन पनि जनवर्गीय संगठनबाट हुने गरेको छ ।
नेकपा युवामैत्री पार्टी हुने वा नहुने ? नेकपा केन्द्रीय समितिमा युवाहरूलाई नेतृत्व दिने सवालमा आगामी महाधिवेशनमा कस्तो मापदण्ड बनाउने ? यो सबैभन्दा गम्भीर विषयले नेकपाको आगामी भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
विवादरहित जनवर्गीय संगठन एकता, युवा, विद्यार्थी, मजुदर, महिला र किसानमा ऊर्जा थपिने छ । पार्टी एकतामा कसको नेतृत्व भन्ने विषयलाई जीत र हारसँग परिभाषित गरे त्यसको पहिलो असर जनवर्गीय संगठनमा देखिने छ ।
आम जनतामा नेकपाको वैचारिक धार प्रष्ट बनाउन जरूरी छ । मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको नेपाली प्रयोगबारे, वर्तमान क्रान्ति अवस्थाबारे जनतामा प्रष्ट बुझ्ने गरीभन्दा पार्टीको महत्त्व बढ्ने छ । नेकपाले क्रान्ति र मालेमावादका आधारभूत विषयलाई छाड्दै, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू सामन्तजस्तै पद र सम्मानका लागि मरिहत्ते गर्ने हो भन्ने दक्षिणपन्थी पार्टीमा रूपान्तरण छिट्टै हुनेछ । तसर्थ नेताहरूले पदलाई साधन मान्दै क्रान्तिलाई साध्यका रूपमा बुझेको खण्डमा मात्र सशक्त र वैचारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हुनेछ ।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका अगाडि साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र पुँजीवादी व्यवस्थासँग संघर्ष गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती छ । यद्यपि अहिले पनि नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू यदुवंशी तवरले लडाइ लडिरहेका छन् । कतिपय घटनाक्रमको सुक्ष्म अध्ययन गर्दा नेपालका कम्युनिस्टले आफ्नो प्रमुख दुश्मन कम्युनिस्टलाई नै बनाएको आभास हुन्छ । अर्काेतर्फ कम्युनिस्टहरूलाई एकअर्काविरूद्ध उत्तेजनामा ल्याएर प्रतिगमनकारीहरूले लडाइरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष लाभ यथास्थितिवादी र प्रतिगामीलाई भइरहेको छ । वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीले गम्भीरताका साथ सबै घटकका कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गर्ने आवश्यक छ ।
अब स्वाभाविक प्रश्न उठ्ने छ – नेकपा युवामैत्री पार्टी हुने वा नहुने ? नेकपा केन्द्रीय समितिमा युवाहरूलाई नेतृत्व दिने सवालमा आगामी महाधिवेशनमा कस्तो मापदण्ड बनाउने ? यो सबैभन्दा गम्भीर विषयले नेकपाको आगामी भविष्य निर्धारण गर्नेछ । निरन्तर क्रान्तिको अभ्यासको लागि पार्टीभित्र युवाको सशक्त उपस्थिति हुन जरूरी छ ।
क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने पनि युवाहरूको जिम्मेवारी हो । तसर्थ युवा नेता अध्ययन गर्ने, नयाँ–नयाँ विचारबारे वहस गर्ने र स्पातिलो पार्टी बनाउन नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा मौन प्रदर्शन